ပြတိုက်ကနေ နေ့တိုင်းစာရွက်တွေပါလာတတ်လို့ မိသားစုအတွက်စိတ်ချရအောင် အိမ်မှာကိုဗစ်ပိုးသတ်တဲ့စက် ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ခင်ပွန်း - TGI Daily News
ပြတိုက်ကနေ နေ့တိုင်းစာရွက်တွေပါလာတတ်လို့ မိသားစုအတွက်စိတ်ချရအောင် အိမ်မှာကိုဗစ်ပိုးသတ်တဲ့စက် ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ခင်ပွန်း
မင်းသမီးချောလေး နန္ဒာလှိုင်ကတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နန္ဒာလှိုင်က အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးသုံးယောက် မွေးဖွားထားတဲ့ မိခင်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်လည်း အလှလျော့သွားခြင်းမရှိဘဲ အခုချိန်အထိ အရွယ်တင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးပြီး မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ဘဝလေးကတော့ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုဆိုရင် နန္ဒာလှိုင်က အနုပညာလောကကနေ အနားယူခဲ့ပြီဖြစ်သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ခင်ပွန်းနဲ့သမီးလေးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ ဇေသီဟကလည်း အလုပ်တွေကို ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကိုင်ပြီး အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းပီသနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာဆိုရင် ဇေသီဟက မကြာခင်မှာဖွင့်လှစ်တော့မယ့် ဇေကမ္ဘာပြတိုက်ကြီးအတွက် အလုပ်တွေရှုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အလုပ်နေ့တိုင်းသွား‌တဲ့ ဇေသီဟက အိမ်ကိုစာရွက်စာတမ်းတွေ ပါလာတတ်တာကြောင့် မိသားစုဝင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးစိတ်ချရအောင် ကိုဗစ်ပိုးသတ်တဲ့စက် ဝယ်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းကို ဇေသီဟက “ပြတိုက်ကနေ နေ့တိုင်း စာရွက်တွေပါလာလို့တဲ့ စိတ်ချရအောင် ကိုဗစ်ပိုးသတ်တဲ့ စက် ဝယ်ထားပေးတယ်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်…. အခုလောလောဆယ်တော့ အိမ်ကိုလာတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီး ပိုးသတ်တာနဲ့ အလုပ်တော်တော် ဖြစ်နေပြီ။” ဆိုပြီး ရေးသား‌ထားတာဖြစ်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source and Photo Credit-Zay Thiha
ပွတိုကျကနေ နတေို့ငျးစာရှကျတှပေါလာတတျလို့ မိသားစုအတှကျစိတျခရြအောငျ အိမျမှာကိုဗဈပိုးသတျတဲ့စကျ ဝယျပေးလိုကျတဲ့ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ခငျပှနျး
မငျးသမီးခြောလေး နန်ဒာလှိုငျကတော့ တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ ကကျြသရရှေိတဲ့ အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ နန်ဒာလှိုငျက အိမျထောငျကပြွီး ကလေးသုံးယောကျ မှေးဖှားထားတဲ့ မိခငျတဈဦးဖွဈပမေယျ့လညျး အလှလြော့သှားခွငျးမရှိဘဲ အခုခြိနျအထိ အရှယျတငျနတော ဖွဈပါတယျ ။ စိတျခမျြးသာအောငျထားပေးပွီး မိသားစုအပျေါ တာဝနျကပြှေနျတဲ့ ခငျပှနျးကောငျးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ဘဝလေးကတော့ စိတျခမျြးသာ ပြျောရှငျနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အခုဆိုရငျ နန်ဒာလှိုငျက အနုပညာလောကကနေ အနားယူခဲ့ပွီဖွဈသလို စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေိုလုပျကိုငျရငျး ခငျပှနျးနဲ့သမီးလေးတှကေို ပွုစုစောငျ့ရှောကျနတော ဖွဈပါတယျ ။ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ခငျပှနျးဖွဈတဲ့ ဇသေီဟကလညျး အလုပျတှကေို ကွိုးစားပမျးစားလုပျကိုငျပွီး အိမျထောငျဦးစီးကောငျးပီသနတော ဖွဈပါတယျ ။ လတျတလောမှာဆိုရငျ ဇသေီဟက မကွာခငျမှာဖှငျ့လှဈတော့မယျ့ ဇကေမ်ဘာပွတိုကျကွီးအတှကျ အလုပျတှရှေုပျနတော ဖွဈပါတယျ ။
အလုပျနတေို့ငျးသှား‌တဲ့ ဇသေီဟက အိမျကိုစာရှကျစာတမျးတှေ ပါလာတတျတာကွောငျ့ မိသားစုဝငျတှရေဲ့ကနျြးမာရေးစိတျခရြအောငျ ကိုဗဈပိုးသတျတဲ့စကျ ဝယျထားလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီအကွောငျးကို ဇသေီဟက “ပွတိုကျကနေ နတေို့ငျး စာရှကျတှပေါလာလို့တဲ့ စိတျခရြအောငျ ကိုဗဈပိုးသတျတဲ့ စကျ ဝယျထားပေးတယျ။ မှေးနလေ့ကျဆောငျတော့ မဟုတျပါဘူးနျော…. အခုလောလောဆယျတော့ အိမျကိုလာတဲ့ လူတိုငျးရဲ့ပစ်စညျးတှထေညျ့ပွီး ပိုးသတျတာနဲ့ အလုပျတျောတျော ဖွဈနပွေီ။” ဆိုပွီး ရေးသား‌ထားတာဖွဈလို့ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
သားလေးကို‌မိခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးတာကြောင့် ညဘက်သားလေးငိုရင် အိပ်ရေးပျက်တဲ့အကြောင်းကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ပိုးအိအိခန့်